Xog: Taliye Ciidan oo la filayo in Shaqada laga eryo, Maxay tahay Sababtu,? – Hornafrik Media Network
Taliyaha Ciidamadda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed, C/laahi Sanbaloolshe ayaa la filayaa in dhawaan ay Golaha Wasiiradda Somalia xil ka qaadis ku sameeyaan, iyadoona la magacaabayo Taliye Cusub.
Xil ka qaadista Sanbaloolshe ayaa la xiriirta Culays Xukuumadda ka soo koray dhinaca Baarlamaanka oo u yeeray Taliyaha NISA si ay u Su’aalo u waydiiyaan, kadibna ay suuragal tahay inay xilka ka qaadaan. Waxaana Xukuumadda oo u aragta haddii ay taasi dhacdo inay keenayso is qabqabsi Hay’adaha Dawladda dhexdeeda ah ay qorshaynayaa in ka hor inta uusan Baarlamaanka hortagin inay Shaqada ka eryaan.
Raiisul Wasaare Khayre oo la kulmay Qaar ka mida Xildhibaanadad wada ololaha ka dhanka ah Sanbaloolshe ayaa ugu cudur daartay Xadgudubka uu ku sameeyay Xasaanadda Xildhibaanadda. Wuxuuna u ballan qaaday inuu shaqadda ka eryayo.
Sanbaloolshe waxa uu dhawaan amar ku bixiyay in la weeraro Guriga Xildhibaan Yuusuf Kabaale, taasoo sababtay in halkaasi uu ka dhaco iska hor imaad sababay Khasaaro Nafeed. Waxa uu sidoo kale Warbaahinta toos uga hanjabay Xildhibaan Mahad Salaad, taasoo sii kordhisay Caradda Xildhibaanadda.
ka sokoow Culayska Xildhibaanadda ka imaanaya waxaa sidoo kale Warqad rasmiya ka soo qoray Sanbaloolshe Sirdoonka Maraykanka ee fadhiguusu yahay Xalane oo u gudbiyay Qoraalkooda Madaxwaynaha iyo Raiisul Wasaaraha, Waxayna ku wargaliyeen inay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen NISA tan iy inta uu xilka hayo Sanbaloolshe, iyagoo ku eedeeyay Askar ka tirsanaa Gaashaan oo Hub iyo Rasaas gatay, kuwaas oo ay iyagoo Maxaabiis ah ku wareejiyaan Sanbaloolshe si loo maxkamadeeyo uu dib u ciidameeyay, isagoo aan wax tallaabo ka qaadin.
Maraykanku waxay sidoo kale ku eedeeyeen Sanbaloolshe inuu ku tagri falayo Awoodiisa Taliyanimo oo uu u soo gudbiyay Warqad ay ku qoran yihiin Liiska Xildhibaano uu dalbaday in loo duubo Codadka Taleefoonadooda, taasoo ay diideen Sirdoonka Maraykanku.
Sanbaloolshe sidan oo kale ayaa horay Xilka NISA looga qaaday markii uu xiray Xildhibaan, sidoo kalana aflagaadeeyay Raiisul Wasaare Ku Xigeen, isagoo intii uu ahaa Taliyaha NISA waqtigaasi sidoo kale weeraray Guriga Xildhibaan C/wali Qanyar, Guriga Gudoomiyihii hore ee Wadajir, Axmad Daaci, Guriga Siyaasiga C/laahi Sh Xasan, iyo Masuuliyiin kale oo Dawladeed.
Saraakiil u ololaynaysay Uhuru Kenyata oo laga afduubtay meel u dhow Xadka Somalia iyo Kenya.